WARBIXIN: Shan Arrimood Oo Kuugu Qasbeysa Inaad Caawa Daawato Kulanka PSG vs Real %
WARBIXIN: Shan Arrimood Oo Kuugu Qasbeysa Inaad Caawa Daawato Kulanka PSG vs Real
Kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League, ee udhaxeeya kooxaha PSG vs Real Madrid ayaa wuxuu caawa ka dhici doonaa Magaalada Paris, gaara ahaan garoonka Koonfur-Galbeed ku yaala ee Parc des Princes.
Lugtii hore, Los Blancos ayaa kusoo badisay 3-1, waxayna tani faa’ido utahay kooxda reer Spain, laakiin waxaa-nan leyska indho saabi karin in PSG ay tahay mid awood u leh inay sameyso wax badan oo ciyaarta bedali kara.
Hadaba, halkaan hoose waxaan idin kugu soo gudbin doonaa Shan arrimood kuwaasoo kuugu qasbaya inaad daawato ciyaartaan xiisaha goonida ah xambaarsan ee aadka loo wada sugayo.
Ma beenin kartid in Neymar uu yahay mid saameyn xoog leh ku leh PSG, waxaana taasi ka marag kaceysay in laacibkaan uu yahay mid wax badan ku lug lahaa goolashii ay dhalineysa kooxdiisa xagaagan oo dhan.
Isaga kaliya ma uusan dhalineen goolal, ee caawimaad ayuu sameyn jiray, waxaana sidoo kale kooxda jooga Cavani, kaasoo ah mid awood u leh inuu dhaliyo ciyaarta gool uu sameeyo caawimaad gool lagu dhalin karo.
Neymar waxay ubadan tahay in lagu bedalo Angel Di Maria, kaasoo ah mid wax badan ciyaarta ka bedali kara islamarkaana awood badan u leh inuu ciyaarta go’aamiyo, maadaama uu si fiican uyaqaan Los Blancos.
Asensio ama Bale?
Zidane ayaa waxaa isha lagu hayaa midka uu mar kale soo xulan doono, labadan ciyaaryahan, kuwaasoo weerarka kooxdooda awood bada uyeela, inkastoo Marcos Asensio uu yahay mid ka shaqo badan Bale.
Xidiga reer Spain ayaa wuxuu sameeyay kulan 4.2 oo Karoos ah, halka Bale uu sameeyo 2.9, taasoo daliil u ah in Da’yarka Lamberka 20aad wata uu yahay mid shaqo fiican qabta marka uu garoonka ku jiro.
Banzema Iyo Wax-qabadyadii Ugu Dambeeyay Ee BBC
Cristiano Ronaldo, waa nooca ciyaaryahan ee dhaqaajiya Real Madrid, laakiin waxaa caawa uu kasoo horjeeda Cavani, kaasoo isana ah shumaca ay rajeynayaa Jamaahiirta kooxdiisa inuu ifiyo Parc des Princes.
Laakiin, kabtanka Portugal wuxuu yahay mid kaga wanagasan dhigiisa wax qabadka marka garoonka lagu jiro – 8.6 Shuudad ah ayuu kulan walba sameeyaa, halka Cavani loo diiwaan geliyo 5.0.
Banzema waa noo kale, oo ciyaaryahan kaasoo ciyaar walba sameeya 0.3 Karoos ah, halka 1.3 oo fursado ah uu abuuro kulan walba, taasoo cadeyn u ah inuu yahay mid shaqo wacan garoonka ka qabta.
Sida laga soo xigtay BetDecision, waxyaabo badan oo isku tegay ayaa waxay sababi karaan in kulankaan laga bixiyo Kaarar ama Calaamo badan, waxaana ugu yaraan la bixin karaa inta ay ciyaartu socoto Shan Kaar.
Dadka nuqdeeya ciyaaraha waxay qabaan in kulankaan uu noqon karo mid aanan lagu deg-degi kara Natiijada kasoo baxda, inkastoo 40 Boqolkiiba ay guusha siiyeen Real Madrid, PSG [29%] [Barbaro] waa 31%.
Natiijada ugu badan ee la rajeynayo inuu kasoo baxo kulankaan wuxuu yahay 1-1 ama 2-1, kuwaasoo faa’ido u ah Real Madrid, waxayna qabaan Xeel-dheerayaasha in Madrid ay kulankaan gool la’aan soo bixi doonin.